IDuteronomi 4 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Kaloku ke, SirayeliSirayeli, yiphulaphule imimiselo namasiko endinifundisa wona, ukuba niwenze; ukuze niphile, ningene, nilime ilizweilizwe aninikayo uYehova uThixouThixo wooyihlo.
2 Ize ningongezi ezwini endiniwisela umthethoumthetho ngalo, ize ninganciphisi nto kulo, ukuze niyigcine imithetho kaYehova uThixouThixo wenu, endiniwisela yona.
3 AmehloAmehlo enu akubonile oko wakwenzayo uYehova kuBhahali-pehore; ngokuba bonke abo babemlandela uBhahali-pehore, uYehova uThixouThixo wakho ubatshabalalisile phakathi kwakho.
4 Ke nina nanamathelayo kuYehova uThixouThixo wenu, niphilile nonke namhla.
5 Yabonani, ndinifundise imimiselo namasiko, njengoko ndawiselwa umthethoumthetho nguYehovanguYehova uThixouThixo wam, ukuze nenze ngokunjalo phakathi kwelizwe eningena kulo, ukuba nilime.
7 Ngokuba luluphi na uhlanga olukhulu, oluthixo usondeleyo kulo, njengoYehova uThixouThixo wethu, ekumbizeni kwethu konke?
9 Kodwa zigcine, uwugcine umphefumloumphefumlo wakho kunene, hleze uzilibale izinto azibonileyo amehloamehlo akho; hleze zimke entliziyweni yakho yonke imihla yokuphila kwakho. Uze uzazise oonyanaoonyana bakho, noonyana boonyana bakho;
10 ngokukodwa umhla owema ngawo phambi koYehova uThixouThixo wakho eHorebhe, akuthi uYehova kum, babizele ndawonye kum abantu, ndibavise amazwi am, ukuze bafunde ukundoyika yonke imihla abaphila ngayo emhlabeni, bafundise noonyana babo.
11 Nasondela, nema phantsiphantsi kwentaba, intabaintaba isitsha ngumlilo wada wesa esazulwini sezulu, ibubumnyama bamafu nesithokothoko.
13 Wanixelela umnqophiso wakhe, awaniwisela umthethoumthetho ngawo ukuba niwenze, amazwi alishumi; wawabhala emacwecweni amabini amatyeamatye.
14 Wandiwisela umthethoumthetho uYehova ngelo xesha, ukuba ndinifundise imimiselo namasiko, ukuba niwenze elizweni eniwelela kulo ukuba nilime.
15 Zigcineni kunene ngenxa yemiphefumlo yenu, ngokuba anibonanga mbonakalo yanto, mini wathetha uYehova kuni eHorebhe phakathiphakathi komlilo;
16 hleze nizonakalise, nizenzele umfanekisoumfanekiso oqingqiweyo, imbonakalo yento efana nokuba yiyiphi: into emilise okwendoda nokwenkazana,
18 into emilise okwesinambuzane sonke esisemhlabeni, into emilise okweentlanzi zonke ezisemanzini phantsiphantsi komhlaba;
19 hleze uwaphakamisele ezulwini amehloamehlo akho, ubone ilangailanga nenyanga neenkwenkwezi, wonke umkhosiumkhosi wasezulwini, uwexulwe, uzinqule, uzikhonze, ezo uYehova uThixouThixo wakho azabele izizwe zonke phantsiphantsi kwezulu lonke.
21 Phezu koko uYehova wandifuthela ngenxa yamazwi enu, wafungawafunga ukuba andiyi kuyiwela iYordan, andiyi kungena ezweni elihle akunikayo uYehova uThixouThixo wakho, ukuba libe lilifa;
23 Zigcineni, hleze niwulibale umnqophiso kaYehova uThixouThixo wenu, awawenzayo nani, nizenzele umfanekisoumfanekiso oqingqiweyo, imbonakalo yezinto zonke awakuwisela umthethoumthetho ngazo uYehova uThixouThixo wakho.
24 Ngokuba uYehova uThixouThixo wakho ungumlilo odlayo, unguThixo onekhwele.
25 Xa uthe wazalawazala abantwanaabantwana nabantwana babantwana, kwada kwaba kudala nihleli kwelo zwe, nazonakalisa, nenza umfanekisoumfanekiso oqingqiweyo, imbonakalo yento nokuba yiyiphi, nenza okubi emehlweni kaYehova uThixouThixo wenu, namqumbisa:
26 ndingqinisisa amazuluamazulu nehlabathi namhla ngani, ukuba nodaka mpela kamsinya, ningabikho kwelo zwe, niwela iYordan nisiya kulo ukuba nilime; anisayi kuyolula imihla yenu kulo, notshabalala kube kanye.
28 nikhonze khona oothixo abangumsebenzi wezandla zomntu, imithiimithi namatye, abangaboniyo, abangeviyo, abangadliyo, abangajojiyo;
29 eningathi nimfune khona uYehova uThixouThixo wenu, nimfumane, xa nithe naquqela kuye ngentliziyo yenu yonke, nangomphefumlo wenu wonke.
30 Ekubandezelekeni kwenu, zakunifumana zonke ezi zinto, ekupheleleni kwemihla, nobuyela kuYehova uThixouThixo wenu, niliphulaphule ilizwiilizwi lakhe.
31 Ngokuba nguThixonguThixo onemfesane uYehova uThixouThixo wakho; akayi kukuyekela, akayi kukonakalisa, akayi kuwulibala umnqophiso wooyihlo awabafungelayo.
32 Kuba khawubuze emihleni yamandulo, eyayikho ngaphambi kwakho, kususela kumhla uThixouThixo awadala ngawo umntu ehlabathini, uthabathele esiphelweni sezulu, ude use esiphelweni sezulu, ukuba khe kwakho na into enjengale nto ukuba nkulu, ukuba khe kwaviwa into enjengale na?
33 Bakha baliva na abantu izwi loThixo ethetha phakathiphakathi komlilo, njengoko walivayo wena, baphila noko?
34 Okanye kukho thixo wakha walinga na ukuya kuzithabathela uhlanga phakathi kohlanga ngezilingo, nangemiqondiso, nangezimanga, nangemfazwe, nangesandla esithe nkqi, nangengalo eyolukileyo, nangokoyikeka okukhulu, njengako konke akwenzileyo kuni uYehova uThixouThixo wenu eYiputa, emehlweni akho?
35 Waboniswa wena, ukuze wazi ukuba uYehova nguye uThixouThixo; akukho wumbi, nguye yedwa.
36 Wakuvisa izwi lakhe liphuma emazulwini, ukuba akuqeqeshe, nasemhlabeni wakubonisa umliloumlilo wakhe omkhulu, waweva namazwi akhe phakathiphakathi komlilo.
37 Wabathandayo nje ooyihlo, wayinyula nembewu yabo emvaemva kwabo, wakukhupha eYiputa ngobukho bakhe, ngamandla akhe amakhulu;
38 ukuba agqogqe iintlangaiintlanga ezinkulu ezomeleleyo kunawe, zingabikho ebusweni bakho; ukuba akungenise, akunike ilizweilizwe lazo libe lilifa, njengoko kunjalo namhla.
39 YaziYazi ke namhla, ukunyamekele ngentliziyo yakho, ukuba uYehova nguye uThixouThixo emazulwini phezuluphezulu, nasehlabathini phantsiphantsi; akukho wumbi;
40 uyigcine imimiselo yakhe, nemithetho yakhe, endikumisela yona namhla, ukuba kulunge kuwe, nakoonyana bakho emvaemva kwakho, ukuze uyolule imihla yakho emhlabeni, lowo akunika wona uYehova uThixouThixo wakho imihla yonke.
42 obulele ummelwaneummelwane wakhe ngengozi, ebengamthiyile ngaphambili; asabele ke komnye waloo mizi, aphile:
47 balihlutha ilizweilizwe lakhe, nelizwe likaOgi ukumkani waseBhashan, ookumkaniookumkani ababini bama-Amori ababengaphonoshono kweYordan ngasempumalanga;